Muchina wekuwachisa michina uye mazano ekuremekedza nharaunda | Green Renewables
Daniel Palomino | | Simba rekuchengetedza, General, Environment, Nyowani matekinoroji
Muchina wekuwachisa, iwo mudziyo watinoshandisa kuwacha mbatya inokonzera kukanganisa kukuru kwezvakatipoteredza Uye kunyangwe iyo OCU (Sangano revatengi nevashandisi) iine mamwe mazano, izvi hazvisi zvese.
Ichi chishandiso chine musiyano wekushandisa, izvi zvinoreva kuti chinoshandisa izvo zvayinogeza uye imwe yemakurudziro eOCU ndiko kuzadza zvizere dhiramu rekuwachira ku kuwana kudzikisira kwakakura mumutengo wemvura nemagetsi, 2 yezvinhu zvitatu zvakakosha mumashini yekuwachisa.
Mazano avo ari chaizvo panguva yekutenga kwatinofanira kufunga nezvazvo huwandu hwepamusoro hwemutoro uye kirasi yemagetsi kana kushanda kwesimba.
La huwandu hwepamusoro inogona kupfupikiswa seinotevera:
Kwemhuri hombe (vanhu vanopfuura vana): Muchina wekuwacha une huremu hunosvika anosvika mapfumbamwe makirogiramu.
Mhuri dziri pakati nepakati: (vanhu vana): Muchina wekuwacha une huremu hunokwana kusvika ku4 kg.
Kune vanhu vaviri kana vatatu: Muchina wekuwacha une mutoro unosvika kumakirogiramu manomwe.
Kubva 1 kusvika 2 vanhu: Muchina wekuwacha une mutoro unosvika 6 kg.
Kana ari iwo kirasi yemagetsi (Izvo zvechokwadi zvinonzwika kwauri) ndiko kunyorerwa kwemidziyo yemumba yekumanikidza kushandiswa muEurope yese uye nhanho kubva kune anonyanya kushanda:
Kunwa zvine mwero:
Uye yakanyanya kudyiwa:
Pawebsite yeOCU unogona kuziva nezve michina yekuwachisa inonyatsoenderana nezvido zvako uye wozvienzanisa zvichibva pane izvi hunhu uye zviri pachena mutengo. Dzvanya pano kuti uone muenzanisi weOCU.
Asi chinhu hachigumire pano, chimwe chezvinhu zvakataurwa zvinokonzeresa kukanganisa kukuru kwezvakatipoteredza ndiko kushandiswa kwemvura, kuwandisa, pakushambidza kwega kwega.
Muchina wakasukwa wekuwachisa unogona kudya uchitenderedza 200 litita emvura kune yakazara mutoro.
Pamusoro pezvo, pane mhando mbiri dzemuchina wekuwachisa, idzo dzine mutoro wepamusoro uye dziya dzine mutoro wepamberi, iwo ekutanga ndiwo mawasher anoshandisa mvura yakawanda, nepo yekupedzisira ichikwanisa kutenderedza 2 uye 7 litres pa38 kg yemutoro.
1 Muchina wekuwachisa
1.1 "Vanoda kukwikwidza" yemuchina wekuwachisa
1.1.1 Mhando dzemuchina wekuwachisa
1.1.1.1 Mumusika weSpain
1.1.1.1.2 Hotpoint, Akaltis
1.2 Michina yekuwachisa zvachose
1.2.1 Drumi naGiraDora
1.2.2 Bicilavadora uye Bike Washing Machine (iyo yakasarudzika vhezheni yekutanga).
1.2.3 Hula Washer. Muchina wekuwacha mune hula hoop
1.2.4 Washup. Kushambidza muchina-chimbuzi
1.2.5 Shamba. Shower uye yekuwachisa panguva imwe chete
1.2.6 Magetsi Wheel Kugeza Muchina
1.2.7 Dolfi, geza mbatya ne ultrasound
2 Detergent, yechitatu yakakosha chinhu mukuwacha
Yechokwadi "ecological" yekuwachisa michina haina sezvaunofungidzira iwo, yakajairwa uye yazvino muchina wekuwachisa uyo unoshandisa hafu kana shoma magetsi nemvura nekuti "ecofriendly".
Pamwe, pane akajairwa machini ekuwachisa ayo anogona kutariswa ecological uye "ecological" iwo.
Parizvino tinoenda neyekutanga, ayo anoonekwa senge ecological.
"Vanoda kukwikwidza" yemuchina wekuwachisa
Muchina wekuwacha unofungidzirwa nezve ecological nekuti inosangana nematanho enongedzo, mukushanda kwayo uye mukugadzirwa kwayo.
Chekutanga pane zvese izvo Iwe unofanirwa kutora anokwana gumi nemashanu litita emvura pakirogiramu imwe neimwe yehembe. Uku kusuka kunonzwisiswa mukutenderera kwenguva refu (yekotoni) uye nemvura inopisa.
Mune yako yekugeza kutenderera, simba rako rekuchengetedza rinofanira kunge riri 0.23 KW / h uye nekirogiramu imwe neimwe yenguo.
Uye pakupedzisira, izvo zvinhu zvinogadzirwa nemuchina wekuwacha unofanirwa kutarisirwa nekuti pane bioplastics iyo inogona kushandiswa pakugadzira kwayo.
Neiyi nzira, CO2 emissions inoderedzwa mukuwedzera kune iyo yakadzikira kwazvo mamiriro ezvakatipoteredza sezvo chiri chinhu chisingagadzirisike.
Kune rimwe divi, kana tichifanira kutenga muchina wekuwachisa kana chero chimwe chigadzirwa, sevatengi, tinofanirwa kufunga nezvazvo chitaridzi chesimba, yandakambotaura.
Kwete chete ichatizivisa nezvekushanda kwesimba kwemidziyo, asi ichatipawo simba rekurira, zvese muchikamu chekuwacha uye nespin chikamu, tichidzivirira kusvibiswa kweruzha uye zvichemo kubva kune vamwe vavakidzani.
Mhando dzemuchina wekuwachisa
Parizvino, ini ndichine izvo zvinoonekwa semushini wekuwachisa ecological uye ndeyekuti mukati mekirasi ino yekuwacha michina tinogona kuwana mhando dzakasiyana uye mamodheru
Semuenzaniso tinogona kuwana michina yekuwachisa isingade mvura yekushanda kwavo seimwe yeLG.
Yakanga yatoburitsa zvigadzirwa senge LG Styler, wadhiropu inosunga panguva imwechete iyo inotibvumidza kubvisa kunhuhwirira kwakashata asi panguva ino LG yaenda nhanho kumberi uye inotitambidza nemuchina wekuwachisa uyu, uyo mukuwedzera pakubvisa iyo munhuhwi wenguo unozotinatsa.
Iyo dhizaini haisi nyowani zvachose uye zvinoenderana nepfungwa yevamwe vadzidzi vanobva kuNational University yeCórdoba, kuArgentina.
Vadzidzi ava vakagadzira iyo Nimbus modhi, iyo inoshanda neyechisikigo CO2 uye biodegradable sipo.
Iyo yekushambidza kutenderera inotora ingangoita maminetsi makumi matatu uye iyo kabhoni dhayokisaidhi inoshandiswa nemushini inoshandiswazve kakawanda mukati memushini.
Ichitevera maitiro mamwe chete, LG yakagadzira muchina wayo wekuwachisa, kunyangwe hausi parizvino pamusika, kuvhurwa kwayo kuri munguva pfupi.
Kune rimwe divi, yatove kutengeswa muUnited Kingdom uye muUnited States, tinowana muchina wekuwachisa Xeros. Muchina wekuwacha uyu unokwanisa kusuka mbatya dzedu neinopfuura girazi remvura.
Kuti uwane izvi, tora zvimwe epurasitiki Pellets ayo anoiswa mumuchina wekuwachisa, pamwe negirazi remvura uye pavanokwizwa vachipokana nenguo nekuda kwekufamba kwedhiramu, ivo vanokwanisa kuchenesa tsvina nekubvisa makwapa.
Aya mabhora, akafanana nemupunga zviyo muhukuru inogona kushandiswa kusvika zana nguva uye muchina une mudziyo unovaunganidza pakupera kwega kwega kwekugezesa. Uye zvakare, ivo havana chepfu uye havakonzeri chero rudzi rwezvirwere.
Ivo vatove kuyedzwa zvinobudirira muketani yehotera yeHyatt.
MuSpain tinogona kuwana michina yekuwachisa yakadai seSamsung Ecobubble, iyo Hotpoint, Aqualtis kana iyo Whirlpool Aqua-Steam modhi.
Muchina wekuwachisa uyu uchienzaniswa neimwe yechiratidzo chimwe chete asi yemhando dzakasiyana, hauwani mhedzisiro iri nani musimba kana kushambidza kushanda zvinoenderana neongororo yakaitwa neOCU.
Aya mamodheru ane A ++ simba rekushandisa system mukuwedzera pane kuita kwakanaka.
Saizvozvo, ivo vanogadzirwa nemapurasitiki akadzoreredzwa akawanikwa kubva kumafriji ekare uye michina yekuwacha, zvichideredza zvakanyanya mweya weCO2 mukugadzira kwavo.
Kunyanya, ivo vatangisa iyo 6769 modhi, vachivimbisa yakanyanya kuchengetedza mvura ye35% kuwedzera kune A ++ simba rekuita.
Michina yekuwachisa zvachose
Iye zvino ndichakuratidza iyo michina yekuwacha iyo iri yakawanda ecological uye iwe unonzwisisa iyo chikonzero cheyangu musiyano pakati peumwe neumwe.
Iyo GiraDora muenzaniso wewasher uye dryer kubva kune vamwe vadzidzi muPeru uye yakagadzirirwa kuti vanhu vagare pairi nekuwacha nekuomesa mbatya dzavo nekushandura chitiviri.
GiraDora muchina wekuwacha
Muchina wekuwachisa wezvakatipoteredza wanga uri iwo mufananidzo weDrumi, iyo yakavhurwa pamusika uye iri "yepamusoro" asi iine mashandiro akafanana.
Ivo vanokwanisa kushambidza dzinenge nhatu kana nomwe mbatya dzinodya dzinosvika mashanu litita emvura.
Ose ane mabhenefiti akakura senge kurovedza muviri, kuchengetedza simba uyezve, kudzikiswa kwetsoka dzekabhoni.
Muchina wekuwachisa Drumi
Bicilavadora uye Bike Washing Machine (iyo yakasarudzika vhezheni yekutanga).
Iyo bicilavadora ine mukana mukuru mumatunhu ekumaruwa uko mbatya dzichiri kuwachwa nemaoko. Bhasikoro rinoshandiswa kugona kufambisa dhiramu remuchina wekuwacha usina magetsi.
Kune rimwe divi, iyo Bike Kushambidza Mashini yakafanana neiyo yapfuura asi nemusiyano wekuti iwo wakanaka uye une mutengo wakakwirira kunyangwe uine basa rakafanana neiro rapfuura.
Yakave yakagadzirwa nevadzidzi veChinese kubva kuDalian Nationalities University.
Bike Kugeza Muchina
Hula Washer. Muchina wekuwacha mune hula hoop
Muchina wekuwachisa uyu wakagadzirwa nemaElectrolux mainjiniya. Muchina wekuwacha uyu une hula hoop inotinakidza uye inotigarisa tiri muchimiro isu tichigona kusuka mbatya dzedu.
Izvo hazvipedze magetsi, kuwacha kunotora mukana wesimba iro ratinopa nekufamba kwemuviri wedu.
Ingo isa sipo mukati uye tanga kutenderera!
Ipapo isu tine avo vanoda kushandisa zvakanyanya kuchengetedza mvura nekubatanidza marara system senge:
Washup. Kushambidza muchina-chimbuzi
Mhando yakasanganiswa pakati pemuchina wekuwachisa uye chimbuzi kuti uwane izvo zvatinoshandisa mvura shoma.
Kushanda kwayo kunoenderana nekubatanidza nzvimbo yekubudisira mvura yemuchina wekuwachisa neyekupinda muchimbuzi, kuitira kuti mvura yese irikushandiswa parizvino pakugeza, ishandiswe nekukweshesa cheni.
Shamba. Shower uye yekuwachisa panguva imwe chete
Shower uye yekuwachina prototype panguva imwe chete. Dhizaini yayo ichatibvumidza kushandisa zvakare mvura yekugeza kusuka mbatya.
Uye pakupedzisira, musiyano wakajeka wekuwacha mbatya mune yechinyakare fashoni kana kuzvivandudza iwe pachako.
Magetsi Wheel Kugeza Muchina
Dhizaini yayo yakavakirwa pane yechinyakare vhiri remvura uye rakagadzirwa nehunyanzvi kubva kuChinese University yeJiao Tong kuitira kuti vaunze kugeza kwakasimba kunharaunda uko ivo vasati vava nemagetsi.
Dolfi, geza mbatya ne ultrasound
Sekureva kwevagadziri vayo, Dolfi anobvisa tsvina kuburikidza neiyo ultrasound system uye nekushandisa kakapetwa ka80 simba pane chero akajairwa muchina wekuwacha.
Isu tinongofanirwa kuisa mbatya mumvura, dzisingasviki 2 kg, sipo diki uye chishandiso cheDolfi. Mumaminetsi makumi matatu kusvika makumi mana mbatya dzedu dzinenge dzakachena.
Detergent, yechitatu yakakosha chinhu mukuwacha
Kana isu tikaisa yakawanda yekuwachisa mumushini wekuwachisa, haisi chete inoita muchina une matambudziko, asi isu tinoitawo a zvisina basa uye zvisina basa kukuvadza nharaunda.
Kana iwe uine dosi yakawandisa yesipo, chimwe chezvinhu izvi chichaitika kwauri:
Hwema hwakasimba kana uchivhura muchina wekuwachisa.
Zvipfeko zvinoita kunge zvine mafuta kana kunzwa kuomeswa kana waainwa.
Wacherekedza kuoneka kwenzvimbo diki pamusuwo wedhiramu.
Iyo yekuchenesa dhirowa inowanzo gara yakasviba mushure mega yega yekugeza, kune zvakasara.
Mubvunzo wakakosha ungave yakawanda sei sipo yekuisaZvisinei, hapana dhiiyo chaiyo nekuti zvinoenderana nesipo, muchina wekuwacha, mugadziri, zera remuchina, zvichingodaro
Zvisinei, nyanzvi dzinotsanangura kuti:
“Kazhinji, pasi pemamiriro ezvinhu akajairika, chipimo chemamirilita makumi mashanu echinhu chinosuka mvura chinokwana mbichana mbichana.
Izvo zvakakoshawo kuti usazadze muchina wekuwachisa nehembe kuti usabvaruka. Kana kuita matunhu asina chinhu, asi usaise huremu hwakawanda kupfuura zvinokurudzirwa.
Zvisinei, kana iwe wakaita seni, chenjera nezviito zvangu kutarisira nharaunda, idzi sarudzo dzekuwacha mbatya dzinouya zvakanaka:
Tenga zvachose zvakasikwa sipo, kudzivirira makemikari.
Gadzirira yedu yekuzvigadzirira yekugezesa ine bhawa reMarseille sipo, yakakosha mafuta kuitira kuti zvipfeko zvinhuwidze sezvatinoda uye girazi rebheka soda. Munguva isingasviki awa tinogona kuigadzirira nekuishandisa kwemwedzi. Ehupfumi uye ecological mhinduro!
Tsiva mupfekedza jira neapuro cider vhiniga nemafuta anokosha. Vhiniga haishandiswe chete kupfeka masaladi, asi zvakare ine simba rakakwira kupfava machira.
Shandisa sipo dzepanyama, idzo dzeupenyu hwese.
Dzivisa kushandisa bleach.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Nyowani matekinoroji » Muchina wekuwachisa michina uye mazano ekuremekedza nharaunda